Ntughari uche na ozioma nke ubochi: Jenụwarị 23, 2021 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ntughari uche na ozioma nke ubochi: Jenụwarị 23, 2021
di Paolo Tescione - Jenụwarị 23, 2021
Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n’ụlọ. Ìgwè mmadụ gbakọtakwara ọzọ, nke mere ka ọ ghara ikwe ha rie. Mgbe ndị ikwu ya matara nke a, ha kpebiri ịkpọrọ ya, maka na ha kwuru, sị, "Isi wee daa ya." Mak 3: 20-21
Mgbe ị na-atụgharị uche n’ahụhụ nile nke Jisos, o yikarịrị ka echiche gị ọ ga-echigharị n’elu obe. N’ebe ahụ, i nwere ike icheta maka mmapụ ya na kọlụm, ebu obe, na ihe ndị ọzọ mere site na mgbe e jidere ya ruo ọnwụ ya. Ka osi di, enwere otutu ahuhu ndi mmadu ndi ozo nke Onyenwe anyi diri maka ọdịmma anyi na mmadu niile. Ozi oma ozioma nke di n’elu nenye ayi ihe omuma ndia.
Ọ bụ ezie na nhụjuanya anụ ahụ adịghị mma, enwere mgbu ndị ọzọ nwere ike isiri anyị ike ịtachi obi, ma ọ bụrụ na ọ naghị esiri anyị ike. Otu nhụjuanya dị otú a bụ ndị ezinụlọ gị na-aghọtahie ma na-emeso gị dị ka a ga-asị na isi enweghị isi. N'ihe banyere Jizọs, ọ dị ka ọ bụ na ọtụtụ ndị ezinụlọ ya, ma e wezụga nne ya, nọ na-akatọkarị Jizọs. ọ nọ na-anata. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ihe doro anya bụ na o doro anya na ndị ikwu Jizọs gbalịrị igbochi ya ijere ndị chọrọ nnọọ ịnọnyere ya ozi. ịkwụsị njedebe ya.
Ndụ ezinụlọ kwesịrị ịbụ obodo ịhụnanya, mana nye ụfọdụ, ọ bụ isi mmalite nke ihe mgbu na ihe mgbu. Gịnị mere Jizọs ji hapụ Onwe ya ịtachi obi n'ụdị nhụjuanya a? Otu akụkụ, inwe ike ịkọ ahụhụ ọ bụla ị na-atachi obi site na ezinụlọ gị. Ọzọkwa, ntachi obi ya gbapụtara ụdị nhụjuanya a, na-eme ka o kwe ndị ezinụlọ gị merụrụ ahụ mfe ịkekọrịta mgbapụta na amara ahụ. Ya mere, mgbe ị na-ekpeku Chineke ekpere ka gị na ndị ezinụlọ gị na-agba mbọ, a ga-akasi gị obi ịmara na Onye nke Atọ n’Ime Otu dị nsọ, Jizọs, Ọkpara ebighi ebi, ghọtara ahụhụ ị na-ata site na ahụmịhe nke mmadụ. Ọ maara ihe mgbu ọtụtụ ndị ezinụlọ na-enwe site na ahụmịhe merenụ.
Tugharia uche n'uzo obula ichoro ime ka Chineke nwee ihe mgbu nye ezinulo gi. Chigharịkwuru Onye nwe anyị onye ghọtara nghọtahie gị niile wee kpọọ nnụnụ dị ike na ọmịiko gị ka ọ banye na ndụ gị ka o nwee ike gbanwee ihe niile ị na-ebu na amara na ebere ya.
Onyenwe m nke nwere ọmịiko, ị diri ọtụtụ ihe n’ụwa a, gụnyere ịjụ na nlelị nke ndị ezinụlọ gị. M na-enye gị ezinụlọ m na n'elu ihe mgbu niile nọ na ya. Biko bia gbaputa esemokwu nile nke ezi n’ulo ma weta ogwu na olile-anya n’ebe mu na ndi niile choro ju. Jesus ekwere m na gị.
Tụgharị uche taa: Ọ bụ uche Chineke
Na-atụgharị uche taa: oke iwe nke Chineke
Tụgharị uche taa: nkasi obi maka onye mmehie chegharịrịnụ
Iwuli ala eze, ntughari uche nke ubochi
Ezinụlọ: olee etu o si dị mkpa taa?
Ntụgharị uche nke ụbọchị: ọdịiche dị ike
Na-atụgharị uche: Ebere na-aga ma ụzọ abụọ